Imiqathango yokuSebenzisa-iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / Iimeko zokuSetyenziswa
Ulawulo olupheleleyo lweziko lekhontrakthi
Olu lwazi lulandelayo sisivumelwano esisebenzayo kubo bonke abathengi be-Network-Radios.com phakathi kwabo bafumana iinkonzo kunye neemveliso ezithengiswa kwi-www.Network-Radios.com kunye Mazikeen OÜ (I-Network-Radios.com). Imigaqo neMiqathango iya kusebenza kubo bonke abandwendwela www.Network-Radios.com kunye/okanye ukuthenga okusemthethweni kwiwebhusayithi. Ulwazi lwakho luya kugcinwa kwaye lusetyenziswe ngendlela efanelekileyo ngokuhambelana ne-GDPR.
INETWORK-RADIOS.COM ISIVUMELWANO SOKUTHENGISWA
Isivumelwano seNtengiso Yenziwe phakathi kweNethiwekhi-Radios.com kunye nawe (uMthengi) xa ugcwalisa kwaye ungenisa ifom ye-elektroniki kwiwebhusayithi yethu, uya kuba uyayivuma le Migaqo neMiqathango elandelayo kwaye wenza isithembiso sokuthenga iimpahla Mazikeen OÜ. Ulwamkelo lwethu kunikezelo lwakho luya kuthathwa luphelele kuphela ngexesha sithumela i-imeyile yokuqinisekisa ukuthunyelwa okanye xa i-SMS equlethe ulwazi olufanayo ithunyelwe kuwe, ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba ukugqitywa kuxa iimpahla oziodolileyo. zithunyelwa, nayiphi na imeko eyenzekayo kuqala. Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu i-odolo yakho iyaliwa ngaphambi kokuba samkele isipho sakho kunye nentlawulo ethathiweyo, imbuyiselo epheleleyo iya kwenziwa ngokukhawuleza. Naziphi na iimpahla ngendlela efanayo esingakhange siziqinisekise kwi-imeyile yokuqinisekisa ukuthunyelwa okanye i-SMS engathunyelwanga kuwe ayiyonxalenye yesivumelwano esibophelelayo phakathi kwakho kunye nawe. Mazikeen OÜ.
Ukuthengisa okunxulumene nobudala be1.1
Yonke imiyalelo ebekwe ngabo bangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala kufuneka ibe ngemvume yomzali okanye yomkhathaleli ngalo naluphi na ulwazi olulandelayo olunikezwe ngumntwana ukuba lwenziwe ngemvume yomzali okanye yomgcini. Sifuna ukuba umnini wekhadi abekhona ukuze anike ulwazi kwiimeko apho umntu ongaphantsi kweminyaka eyi-18 ebeka iodolo. Ikhontrakthi yokuThengisa igcinwa kuphela ukubonelela ngale migaqo ichazwe ngasentla iyagcinwa.
1.2 Ukuthengisa okungagunyaziswanga
Inethiwekhi-Radios.com iya kuzama ukuqhubekeka yonke iodolo ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, ukuba siyakholelwa ukuba i-odolo yenziwe ngaphandle komnini wekhadi / imvume yabanini-akhawunti emva koko iodolo iyakubanjwa okwethutyana kulindwe ukucaciswa kolwazi - jonga inqaku 2.1 ngolwazi oluthe kratya. Kwimeko apho i-odolo iqinisekisiweyo ngobuqhetseba umboneleli wentlawulo uya kuqhakamshelwa kwaye ikhontrakthi yentengiso iyekisiwe.
2. UKUFAKWA KWOMYALELO KWINETWORK-RADIOS.COM - UKUTHENGWA KOKUZALISEKA
Konke ukuthengisa kuya kuqalwa ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeNetwork-Radios.com, le ndawo kuphela kwendawo efanelekileyo apho ukuthengisa okugunyazisiweyo yiNethiwekhi-Radios.com kuya kuqalwa khona kwaye iimpahla kunye neenkonzo ezinikezelwa yiNethiwekhi-Radios.com (Mazikeen OÜ) iya kuboniswa kuphela kule webhusayithi.
I-2.0.1 Network-Radios.com iya kubhengeza iimveliso kwiphepha lewebhu elikhankanywe ngasentla; Iimveliso ziya kuba nenkcazo echanekileyo yempahla ethengiswayo ngokweenkcukacha zomgangatho wabenzi; Inethiwekhi-Radios.com ayizukuziphendulela ngempazamo yoluntu ngokunxulumene nolwazi ngemveliso kodwa iya kuqinisekisa ukuba naziphi na iingxaki ezibangelwe koku ziya kulungiswa kwaye umthengi ubuyiselwe ngokufanelekileyo ukuba intlawulo sele ithathiwe. Imifanekiso yemveliso yenzelwe ukubonisa kuphela kwaye ingahluka kuMveliso oyifumanayo.
2.0.2 Zonke iimveliso ziya kuba nesibonakaliso esicacileyo nesichanekileyo sesitokhwe, iNethiwekhi-Radios.com inelungelo lokutshintsha olu lwazi lwesitokhwe nanini na ngexesha lenkqubo yoku-odola; Kuza kuqhagamshelwana nabathengi ukuba oku kunokuba nempembelelo kwiodolo yabo.
2.0.3 Ngokubeka i-odolo kwiNethiwekhi-Radios.com ubonakalisa ukuba uyifundile kwaye wavumelana nemigaqo nemiqathango yewebhusayithi kwaye unamandla kunye negunya lokwenza loo myalelo.
2.0.4 Bonke abathengi be-Network-Radios.com baya kucelwa ukuba benze iakhawunti ukuze baqhubeke nokuthenga iimpahla kwiwebhusayithi yethu.
2.0.5 Onke amaxabiso abonisiweyo ngawokugqibela kwaye iVAT ayisayi kongezwa kuba iimveliso zithunyelwa ngqo zisuka kubavelisi okanye kubasasazi abagcina iimpahla baseHong Kong. Kananjalo, iirhafu zalapha ekhaya ziya kuhlawuliswa xa kucocwa iimpahla kumasiko. Xa iimveliso zithunyelwa yi-DHL, umthengi uya kuhlawula iifizi zesiko ngqo kwikhuriya ehambisayo. Ukuba izinto zithunyelwa ngeeNkonzo zePosi, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wesiko elilelona likufutshane nedilesi yakho.
Iintlawulo ezenziwe kusetyenziswa indlela yokubhatala ye-PayPal ziya kuhlawuliswa ngokupheleleyo nangoko, nokuba iodolo izalisekiswe ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye xa kuziswa okokuqala.
2.1 Ukhuseleko lwe-odolo
Ukuba unqwenela ukuba into yakho isiwe kwidilesi engabhaliswanga kwikhadi letyala / ledebhithi iqela lethu lokhuseleko liya kuqhagamshelana nawe. Ngamanye amaxesha, siya kufuna ulwazi ngokhuseleko kunye nokuchongwa ukuba kubonelelwe ngumthengi oya kuthi athumele nge-imeyile ulwazi olufunekayo kwiqela lethu lokhuseleko. Inethiwekhi-Radios.com ngamanye amaxesha iya kucela ulwazi oluthe kratya ukuqinisekisa ukuthengwa, olu lwazi luya kuvavanywa liqela lethu lezokhuseleko kwaye emva koko litshatyalaliswe. Inethiwekhi-Radios.com ilawulwa ngokokubona kwayo kwaye iNethiwekhi-Radios.com inelungelo lokulahla iodolo nangaliphi na ixesha ngexesha lenkqubo yoku-odola. Ulwazi oluthe kratya luya kuchazwa ngokulandelelana komntu ngamnye kwaye lungahluka- Network-Radios.com iya kufuna ngamanye amaxesha ifom ye-ID ukuqinisekisa idilesi yomthengi kunye neenkcukacha zokuhlawula, ngamanye amaxesha iNethiwekhi-Radios.com iya kufuna ukuba umthengi aqhakamshelane nomnikezeli wakhe wentlawulo. ngolwazi oluthe kratya.
2.2 Iindlela zokuhlawula
Inethiwekhi-Radios.com okwangoku yamkela uluhlu olubanzi lweendlela zokuhlawula, indlela nganye yokuhlawula iya kuba phantsi kovavanyo olufanayo lokukhuseleka kunye neNetwork-Radios.com iya kubamba ilungelo lokuthatha intlawulo epheleleyo yempahla e-odolwe nangaliphi na ixesha ngalo myalelo. inkqubo. Iindlela zokuhlawula ezikhoyo zezi zilandelayo:
Ikhadi lokuTsala / iKhadi letyala (iVisa, iVisa Debit, iVisa Electron, iMaestro, iMasterCard)
Iintlawulo zePayPal ziyafumaneka.
Inethiwekhi-Radios.com iya kuhlala izama ukufezekisa iimfuno zakho zokuhambisa; Sisebenzisa uluhlu olubanzi lweenkonzo ezihloniphekileyo zekhuriya kwaye sinokuhambisa kwiindawo ezininzi ngaphandle kwengxaki. Ikhuriya yethu iya kuthatha iimpahla kumaziko ethu. Siza kusebenzisa eyona yekhuriya ilungele sihlandlo ngasinye, ngokusekwe kwindawo esiya kuyo, ubunzima kunye nobungakanani bephakheji.
Onke amaxesha okuhanjiswa axeliwe kwiintsuku zokusebenza kwaye uqaphele ukuba kwimeko yokuhanjiswa kosuku lokusebenza luchazwa njengalo naluphi na usuku ngaphandle kweempelaveki okanye iiholide zikawonke-wonke. Nakuphi na ukuthengwa okwenziweyo ngosuku olungasebenziyo kuya kuqhutywa ngosuku olulandelayo lokusebenza. Umzekelo. Umyalelo olandelayo wokuhanjiswa kwempahla obekwe ngoMgqibelo uya kuqhutywa kuphela ngoMvulo olandelayo.
3.1 Idilesi yonikezelo
Izinto zithunyelwa kwidilesi yokuhanjiswa echaziweyo enikezwe ngumthengi kwifom yoku-intanethi. Ukuba idilesi yokuhambisa yahlukile kwidilesi ye-invoice, uMthengi uya kubonelela ngazo zombini iidilesi xa ebeka iodolo. Ipasile iya kuthunyelwa kwidilesi yokuhambisa eboniswe ngokukodwa kwifom.
3.2 Ayiphumelelanga Iinzame Zokuzisa
Kwimeko apho unikezelo olungaphumelelanga, ngokuxhomekeke kwiimeko kunye nomgaqo-nkqubo womntu ophetheyo, uMthengi unokufumana inqaku lendlela, okt, "ukubiza ikhadi" kwibhokisi yakhe yeposi. Ukuba ngenene ikhuriya ishiye inowuthi, uMthengi kuya kufuneka afowunele umphathi ukuze alungiselele umhla omtsha wokusiwa. Ukuba uMthengi akaqhakamshelani nenkonzo yekhuriya loo nto iya kuzanywa ngokuzenzekelayo ukuhanjiswa ngolu suku lulandelayo lokusebenza ukuya kuthi ga kwaye ngamanye amaxesha kugqithise kwimizamo emi-2 yokuhanjiswa ngaphandle kwephakheji yeeNkonzo zePosi, ezi zinto ziya kufuna ukuqokelelwa emva komzamo wokuqala wokuziswa. Kungenzeka kwakhona ukuba uMthengi akafumani khadi lokufowuna kule meko. Luxanduva loMthengi ukulandelela ii-odolo zakhe kwi-Intanethi ngolwazi lokulandela umkhondo kwiwebhusayithi yomntu ophetheyo, ukuze ajonge ulwazi lwephakheji kwaye azise ikhuriya okanye iinkonzo zeNethiwekhi-Radios.com zabathengi ngayo nayiphi na imiba ngokukhawuleza. Ukuba iphakheji ayinakuphinda izanywe, iqokelelwe okanye ihanjiswe kunye / okanye ngumthengi, iphakheji iya kubuyiselwa kwiNethiwekhi-Radios.com apho kuya kubakho umrhumo wokuphinda uhlawule.
3.3 Ukusiwa mva kwexesha
Ngamanye amaxesha ipasile ayinakuhanjiswa ngexesha elilindelweyo okanye ixesha elichaziweyo lokuhambisa elinikezwe umphathi kunye / okanye iNethiwekhi-Radios.com kwaye ukulibaziseka kuqhubeka ixesha elide kakhulu silindele ukuba uMthengi aqhakamshelane neNethiwekhi-Radios.com ukuze Ukuvula uphando ukuze kuqinisekiswe ukuba ipasile iphi, okt ipasile inokulahleka / ibiwe / ilahleke. Nceda uqaphele ukuba kwimeko yokuhanjiswa kosuku lomsebenzi luchazwa njengalo naluphi na usuku ngaphandle kweempelaveki okanye iiholide zikawonke-wonke.
3.4 Ukulahleka kwepasile
Ukuba imeko enjalo inokuvela, iNethiwekhi-Radios.com inyanzelekile ukuba ihloniphe amaxesha abekiweyo ngabaphathi malunga nokubhengeza ukulahleka kwephakeji, ukuqhubekeka nebango nekhuriya kunye nokubuyisela imali yokuhambisa okanye ukubuyisela into leyo umthengi. Yiyo loo nto uMthengi ekwabotshelelwe kwakwisakhelo esinye samaxesha:
Ukuze iNetwork-Radios.com ibhengeze ngokusesikweni ipasile elahlekileyo, uMthengi uneentsuku ezi-2 zokuxela ukulahleka kwepasile okanye ukuqala kumhla athe wafumana ngawo i-imeyile yokuqinisekisa. Ngaphandle kweli xesha, akukho bango liya kwamkelwa. Nceda uqaphele ukuba ukuthunyelwa kwamanye amazwe oku kuyakwandiswa ngokungqinelana nenkonzo oyikhethileyo, sifuna ukwaziswa kwisithuba seentsuku ezi-2 zomhla woqikelelo lonikezelo. Ukuba ipasile ingabhengezwa njengelahlekileyo ngeli xesha likhankanywe apha ngasentla, iNethiwekhi-Radios.com iya kuthatha inxaxheba ekufayiliseni ibango kunye nomphathi kwaye ekugqibeleni inokucela uMthengi amanye amaxwebhu ukuba agqibe ukwenziwa komxholo wefayile. UmThengi uya kuthi emva koko athumele ulwazi ngokukhawuleza. Impendulo yokugqibela enxulumene namabango inikwa ophetheyo kwisithuba seeveki enye ukuya kwezintathu. Uhlobo lwempendulo lunokuba lolunye lweentlobo ezimbini: nokuba ipasile ifunyenwe emva koko ibuyiselwe kuMthengi ngenkqubo esemgangathweni, okanye ipasile ibhengezwe njengelahlekile ngumphathi kwaye iNethiwekhi-Radios.com yazisa uMthengi. Kule meko, kwaye ngokuhambelana neminqweno yomthengi, iNethiwekhi-Radios.com inokwenza ukuthunyelwa okwesibini komyalelo okanye iqhubeke ngokubuyisa ngokupheleleyo uMthengi kuyo yonke imali ehlawulweyo. Kwimeko yelahleko, iNethiwekhi-Radios.com iya kuthumela umthengi kwifom yeSibhengezo seNgekhoRisithi, eya kusetyenziswa njengenxalenye yenkqubo yophando. Le fomu iya kuba sisibhengezo sokungafumani irisithi kwaye kufuneka uqhubeke nophando kunye / okanye idatha ye-GPS ibonise ukuba into ihanjisiwe ngempumelelo kwindawo efanelekileyo kwaye oku kuya kusetyenziswa njengenxalenye yetyala elisemthethweni kumamkeli. Oku kunokubandakanya okanye kungabandakanyi uphando lwamapolisa kwaye ayizukukhawulelwa kumthengi weempahla kodwa nomntu / abantu abatyikitye / abafumana iimpahla kwindawo echaziweyo yokuhambisa. Nceda unxibelelane neqela lethu lenkonzo yabathengi ukuze ubuze ngakumbi ngale fomu kwimeko yazo naziphi na izinto ezilahlekileyo. Amaxesha amisiweyo okugqitywa kunye nokutshintshwa aya kwahluka kwimeko nganye.
3.5 Ukufunyanwa kwepasile
Xa izinto zisiwe kuMthengi, uya kucelwa ukuba asayine iimpahla njengesiqinisekiso sokufumana. Ukuba ipasile iza ngokuyinxenye okanye yonakele ngokupheleleyo, ukubhukisha kwabaThengi kufuneka kubhalwe kwinqaku lokuhambisa phambi komthwali. Ukuba akukho kubekelwa bucala okukhankanyiweyo, ipasile iya kuthathwa ngokuba ihanjiswe ikwimeko entle kwaye akukho mabango okanye zikhalazo zilandelayo ziya kwamkelwa yiNethiwekhi-Radios.com.
Ukuba umthengi ufuna ukukhusela ikhuriya, kufuneka afake ibango elibhaliweyo kwikhuriya kwiintsuku ezi-3 (ngaphandle kweholide zikawonke-wonke) emva kosuku lokusiwa. Ibango kufuneka lithunyelwe ngeleta ebhalisiweyo kunye nefom yokwazisa ukuba ifunyenwe.
Nayiphi na ipasile engabuyiswanga ebuyiselwe kwiNethiwekhi-Radios.com inokuphinda ibuyiselwe kuMthengi ngaphandle kokuba babhatala imali yokuhanjiswa. Ukuba kungakho nayiphi na imiba ephethe iphakheji enxulumene nokuqulathiweyo, ilahlekile okanye kungenjalo kuya kufuneka sazisiwe kwisithuba seeyure ezingama-48 ngexesha lokusiwa kwayo ukuqinisekisa ukuba semthethweni kweli bango, kungenjalo iNethiwekhi-Radios.com ayinakukwazi ukuthatha elinye inyathelo. .
3.6 Ukuthumela kwelinye ilizwe / ukuHanjiswa kwaMazwe
Umthengi kufuneka abuze kwabasemagunyeni belizwe labo lokuhlala malunga neemeko zokungena kwezinto eziodoliweyo. Luxanduva loMthengi ukwenza isibhengezo (s) esifanelekileyo kunye / okanye nentlawulo (s) kwabasemagunyeni abafanelekileyo nakumagosa kwilizwe labo.
Umthengi kufuneka abuze kwabasemagunyeni malunga nokusemthethweni kokungenisa elizweni okanye ukusebenzisa iinkonzo kunye nezinto ezi-odoliweyo. Ukuba umthengi akayamkeli okanye uyala intlawulo yerhafu yokungenisa elizweni okanye iirhafu, kuya kuthi ke kuhlawulwe i-30% ye-invoice iyonke kwiindleko zokuhanjiswa kweempahla kunye nokuhanjiswa kwento yokuqala, iintlawulo ziya kususwa kubuyiso lwabathengi Ekubuyeni kwephakheji. Umthengi kufuneka aqinisekise ukuba iinkcukacha zobuchwephesha ezichazwe ngumenzi ziyawuhlonipha umthetho welizwe labo.
Inethiwekhi-Radios.com ayinakubekwa tyala ukuba uMthengi akawuhloniphi umthetho welizwe apho izinto ziya kungeniswa khona.
Inethiwekhi-Radios.com iya kuqinisekisa onke amaxwebhu afunekayo ukuba abonelelwe yiNethiwekhi-Radios.com
4 INETWORK-RADIOS.COM YOKUBUYISWA KWEMALI NOKUTSHINTSHA UMGAQO-NKQUBO
Siyathemba ukuba uyakonwaba nakuphi na ukuthenga okwenzayo kwiNethiwekhi-Radios.com. Nangona kunjalo siyaqonda ukuba ngamanye amaxesha izinto zingenakulindeleka kwaye ukuba unqwenela ukubuyisa into, ungenza njalo ngexesha lamaxesha kunye neemeko ezichazwe ngezantsi.
4.1 Inethiwekhi-Radios.com Umgaqo wokuThengisa uMgama (awusebenzi kwiNtengiso ye-B2B)
Konke ukuthengwa kwe-Intanethi kuxhomekeke kwimigaqo yokuthengisa umgama; Oku kuvumela abaThengi ukuba bathenge into kwiwebhusayithi yethu kwaye emva koko bayibuyise loo nto ukuba ayifuneki kwaye / okanye ayilindelwanga ukubuyiselwa imali ngokupheleleyo kwiintsuku ezili-14 zeKhalenda yokufumana. Ukwenza oku sifuna ukuba into ibuyiselwe kunye nesiqinisekiso sokuthengwa, kwimeko ehlaziyiweyo 'entsha' kwaye ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo weNetwork-Radios.com.
Ukuba ubuya nemveliso, kufuneka uqinisekise inombolo ye-odolo yakho okanye unikeze ubungqina bokuthenga.
Ukuba asikwazi ukuqinisekisa ubungqina bakho bokuthenga, siyazisola kuba singabinakho ukubuyisa imali okanye utshintshiselwano. Amalungelo akho asemthethweni awachaphazeleki.
Ukuba ukhetha ukubuyisa into, nceda uyinyamekele ngelixa isezandleni zakho. Nceda ubuyisele imveliso ongasetyenzisanga; ngokupakishwa koqobo, izixhobo kunye neencwadana. Iinyanda zentengiso kufuneka zibuyiswe zizonke ukuze zibuyiswe. Jonga apha ngezantsi ukukhutshwa:
Imigaqo yokuThengisa uMgama ayizibandakanyi ezi zinto zilandelayo: - Iimveliso zokuzonwabisa ezivuliweyo (isoftware yekhompyuter, iimuvi, umculo, imidlalo yevidiyo, iimemori khadi kunye nee-USB) njengoko kuya kuthi kubonwe kusetyenziswa;
-Imveliso ezithengwe ngekhontrakthi yobhaliso (ngaphandle kokuba kuthengwe kude, apho kuya kufuneka usazise ngenjongo yakho yokubuya ngaphakathi kweentsuku ezili-14 zeKhalenda)
-Amakhadi okuzongeza eselfowuni;
Izinto ezi-odolwe ngokukodwa kuwe (okt kumvelisi)
-Nazo naziphi na izinto ekuye kwafuneka siziguqule ukuze zihambelane neemfuno zakho zofakelo (umzekelo, izinto ezinemingxunya eye yagqobhoza kuzo). Kwimeko apho iinkonzo zibonelelwa ngesivumelwano sakho phambi kokuphela kweli xesha le-14 lokurhoxiswa kwekhalenda, uphulukana namalungelo akho okurhoxisa ukusukela ngexesha unikezelwa iinkonzo kuwe.
Ukuba ubuyisela into esele isetyenzisiwe, sinelungelo lokwala ukubuyiselwa imali okanye ukunciphisa isixa semali ebuyisiweyo kwimpahla ebuyisiweyo ebonisa ubungqina bokusetyenziswa ngaphaya kokuphathwa okuyimfuneko ukubona ukuba iimpahla ziyasebenza. Kuzo zonke iimpahla ezithengwe kwi-intanethi zaze zabuyiselwa kwiintsuku ezili-14 singalindela ukuba zonke iimpahla zibuyiselwe zinokuphinda 'zinokutsha' imeko kwaye iimpahla ezo bekungafuneki ukuba zisetyenziswe. Oku kungafuna ukutywina kwemveliso, ukupakisha kunye nemixholo ukuba ihambelane. Siyaqonda ukuba ibhokisi yamatywina kuya kufuneka yaphulwe ukuvavanya into leyo kodwa ke siyakucela ukuba kuthathelwe ingqalelo kwaye kungathathwa monakalo kwiphakheji xa kususwa amatywina. Indlela umthengi anokuthi aziphathe ngayo iimpahla iyafana ukuba ubuya kuvavanya evenkileni. Xa kufuneka, ukurhoxiswa kungenziwa ukunxibelelana neenkonzo zethu zabathengi. Ukubuyiselwa kwazo zonke iimali ezifunyenweyo, kubandakanya neendleko zokuhanjiswa kweenkonzo, zingaphelanga iintsuku ezili-14 zokurhoxiswa kwekhontrakthi yeenkonzo okanye kwiintsuku ezili-14 zokufumana iimpahla zibuyiswe njengesiqhelo. Ukuba unakho ukubonelela ngobungqina bokubuyiswa ngaphambi kokufumana iimpahla, kuya kufuneka ubuyiselwe imali kwiintsuku ezili-14 zokuthumela obo bungqina. Kwimeko yeempahla ezingafunekiyo, iNethiwekhi-Radios.com ayizukuhlawula iindleko zomrhumo weposi owenziweyo wokubuyisela iimpahla kuthi.
Ukuba umthengi uyalela imveliso kwaye uyirhoxisile ngenxa yempazamo yakhe, nayiphi na imbuyiselo iya kuncitshiswa kwimirhumo yekhadi letyala elinxulumene nentengiselwano.
IMIRHUMO YOKUHANJISWA KWEZIBONELELO: Yonke imirhumo enxulumene nokubuyisa into kufuneka ihlawulwe ngumthengi. Yindlela elungileyo ukuba umthengi azikhusele iimpahla kwaye asebenzise ikhuriya evumela ukulandelelwa kwephakheji. Akukho mbuyekezo iya kukhutshwa de iimpahla zifunyenwe phantsi kweemeko ezichazwe apha ngasentla kwidilesi eza kubonelelwa ziinkonzo zabathengi ze-Network-Radios.com.
Apho iimpahla ezifunyenweyo zinemposiso okanye zingalungelanga injongo okanye njengoko kuchaziwe, abathengi baya kuba namalungelo awahlukeneyo ahlawulwa yiReturn phantsi kwemigaqo-nkqubo yewaranti. Luxanduva lwethu ukukunika iimpahla ezihlangabezana namalungelo akho abathengi. Le Polisi ayichaphazeli amalungelo akho asemthethweni.
4.2 IZICWANGCISO ZENKONZO NEEMALI-MBOLEKO
Ukubuya kunye notshintshiselwano kuzo zonke iinkonzo zokubhaliselwa kugqitywa ngumboneleli kunye nokunye ukurhoxiswa kunokufaka isicelo. Naliphi na ixesha lokurhoxisa liza kuchazwa kwisivumelwano sakho neNetwork-Radios.com okanye umboneleli wobhaliso, njengoko kufanelekile.
4.3 INDLELA YOKUBUYA NOKUTSHINTSHA INTO
Ukuba unqwenela ukubuyisa into, nceda ulandele enye yezi ndlela zingezantsi:
4.3.1 Nxibelelana neQela leNkonzo yaBaxumi bethu
Eyona ndlela ilula yokwenza ukubuya kukuthumela i-imeyile kwiQela leeNkonzo zabaThengi
4.3.2 Ukulungiswa / Ukufakwa endaweni yesiqinisekiso
Le waranti ayisebenzi nakuphi na ukusilela kwimpahla evela koku kulandelayo -
Ukunxiba okufanelekileyo kunye neenyembezi
Ukungakhathali nguMthengi okanye naliphi na iqela lesithathu.
Ukusetyenziswa ngenye indlela kunokuba kucetyisiwe nguMenzi
Ukusilela ukulandela imiyalelo yoMenzi
Naluphi na utshintsho okanye ukulungiswa okwenziwe ngaphandle kwemvume yabavelisi.
Le waranti okanye isiqinisekiso songezwa kumalungelo akho abathengi. Zonke iimveliso ezintsha ezithengiswe yiNetwork-Radios.com ziya kuba newaranti yonyaka omnye (ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela) esebenzayo ukusukela kumhla wokuhanjiswa. Iinkcukacha ezigcweleyo zekota kunye noko kugutyungelweyo kuya kuba yincwadi yemiyalelo kunye nemveliso yakho okanye kwiwebhusayithi yabenzi.
4.3.3 Inethiwekhi-Radios.com Fair Returns Policy
(Ayisebenzi kwintengiso ye-B2B)
Inethiwekhi-Radios.com isebenza ngokubuyisela umgaqo-nkqubo ofanelekileyo. Oku kuvumela abathengi abanento ephosakeleyo ukuba bayibuyisele kuthi ukuze bayilungise, bayitshintshe okanye kwezinye iimeko babuyiselwe imali. Lo mgaqo-nkqubo awuchaphazeli okanye ungabandakanyi umgaqo-nkqubo wemigaqo yokuthengisa umgama weentsuku ezili-14.
UmThengi onezixhobo ezingalunganga ngexesha lewaranti uya kuba nelungelo lokuba izinto zakhe zibuyiselwe ukulungiswa; Inethiwekhi-Radios.com ifuna ukuba abathengi baqinisekise ukubuya kwabo kugunyazisiwe liqela lethu lenkonzo yabathengi, oku kuya kufuna ukuba uMthengi athumele i-imeyile kwiqela lethu leeNkonzo zabaThengi ukuchonga isizathu sokubuyela kunye nesenzo esifunekayo, emva kweentsuku ezili-14 iziphumo zoku ukubuya kuya kuba ngokokubona kweqela leenkonzo zabaThengi. Emva kokuba kuvunyelwene ngokubuya kuya kunikwa ireferensi kwaye uya kucetyiswa ngendlela yokubuyisela into kuthi, lonke ulwazi lokuthumela kunye nokubuyisa luya kubonelelwa liQela leeNkonzo zaBaxumi. Nayiphi na imbuyekezo ethunyelwe kwiNethiwekhi-Radios.com ngaphandle kolwazi okanye ukugunyaziswa kweqela leenkonzo zabathengi linokwaliwa. Inethiwekhi-Radios.com ayizukuthatha xanduva lwazo naziphi na izinto ezibuyisiweyo ezingakhange zicelwe liqela lethu elibuyayo okanye ezithengwe kwiNethiwekhi-Radios.com, oku kubandakanya amakhadi e-SD / iiCable ze-USB / amatyala njlnjl .. Ezi zinto zinokutshatyalaliswa.
4.3.4 Ukubuyisela iMpahla kwiNethiwekhi-Radios.com emva kweentsuku ezili-14 (UKUQINISEKISA)
Apha kwiNethiwekhi-Radios.com sihlala sibuhlungu ukuva ngazo naziphi na iingxaki onokuthi ube nazo xa uthenga. Ukuba impazamo yenzekile zingaphelanga iintsuku ezili-14 zokuthenga, ukubuyiselwa imali okanye ukutshintshiselana kuya kufumaneka, ukuba imveliso yakho iba neziphene emva kweentsuku ezili-14, imveliso yakho inokugqunywa phantsi kwexesha lewaranti yomenzi (ngesiqhelo isithuba seenyanga ezili-12 okanye nangaphezulu). Kuwo onke amaxesha apho imveliso ibuyiselwe kwiNethiwekhi-Radios.com siya kuhlala sifuna ukuvavanya kwaye siqinisekise umba. Ukuba kuye kwakho impazamo kwithuba lewaranti (emva kweentsuku ezili-14) iya kuthi ke iqhubekeke phantsi kwabenzi bewaranti. Kuzo zonke iimeko unganqwenela ukutyelela iwebhusayithi yomenzi okanye uqhakamshelane nabo ngokuthe ngqo, rhoqo kakhulu banakho ukubonelela ngokusombulula ingxaki kunye nenkxaso kumcimbi onawo ngemveliso yakho kwaye oku kungakhokelela kwinkqubo ekhawulezayo. Njengengongoma yakho yentengiso, iNethiwekhi-Radios.com iya kuhlala ikwazi ukunceda ukubuyela kwindawo yethu kwaye emva koko siya kujongana ngqo nomenzi egameni lakho. Nceda uqaphele ukuba izinto ezibuyiselwe ngqo kuthi ziyakufumana ithuba elide lokujika izinto kunokunxibelelana nomenzi ngqo kwaye yiyo loo nto singacebisa ukujongana nomvelisi ekuqaleni njengoko unokuba nengxaki isonjululwe ngokukhawuleza. Xa ubuyisela isixhobo sakho, (ukuba sikhona) kuyakufuneka uqiniseke ukuba sivulwe kwaye simahla kwisoftware yokhuseleko enokusithintela ekubeni sikwazi ukufikelela kuyo. Ukuba isixhobo sitshixiwe, sikhubazekile okanye asikho kwiwaranti xa usibuyisa kwaye sikunika isixhobo esitshintshayo, kungafuneka sikubize iindleko ezipheleleyo zesixhobo kunye / okanye singasebenzisi inkqubo yokubuyiselwa imali (ukuba ikhona): Ukubuyisela iimpahla kwiNethiwekhi-Radios.com kuya kufuneka uphinde unikeze:
Onke amalungu okuqala
Naziphi na izixhobo okanye izipho zasimahla
Izatifikethi, iincwadi, kunye namakhadi ewaranti
Ukupakisha (Ibhokisi, ukuPakisha kwangaphakathi njlnjl.) Xa ubuyile kwiNethiwekhi-Radios.com, ukubonelela oku kungaphakathi kwexesha lewaranti kunye nemigaqo, loo nto iya kuthunyelwa kuMenzi ukuze ayivavanye kwaye ixhomekeke kwisiphumo soku kubuyisela. amatyala oku kunokuba yinto ehlaziyiweyo yomenzi) okanye into elungisiweyo iya kubuyiselwa kumthengi.
Zonke izinto ezibuyiselweyo ziya kujonganwa nazo yiNethiwekhi-Radios.com IiNkonzo zaBaxumi ngokokubona kwazo kwaye ziya kujongwana nazo ngokufanelekileyo; Inethiwekhi-Radios.com iya kufuna ukuba yonke imixholo ibuyiselwe kwaye ibe kwimeko elungileyo kwimeko apho ukubuyiselwa kwemali kuvunyelwene lilungu leNethiwekhi-Radios.com IiNkonzo zabaThengi. Oku kufuneka kusoloko kuvunyelwene ngaphambi kokuba kubuyiswe. Ukuba into ibuyiselwe kwi-Network-Radios.com ngqo emva koko imbuyekezo iyakwaliwa okanye ixhomekeke kwimirhumo ehambelana nayo ukuba into ibonakalisile imiqondiso yoku kulandelayo:
-Utshintsho kuseto oluqhelekileyo lomenzi
-Iinzame zokuthintela ukulungiswa komenzi okanye ukutywina okanye isoftware.
-Nayo nayiphi na idatha yobuqu kwiyunithi, iyasuswa okanye hayi.
- Amatywina kwisoftware aphulwe
-Isixhobo sinekhowudi engacwangciswanga (yokuvula) ikhowudi
Umxholo womenzi (iSoftware) ususiwe / ususiwe
Imiba ngesixhobo ayigutyungelwanga yiwaranti yomenzi wayo
* Inethiwekhi-Radios.com ayizukuthatha xanduva lwedatha elahlekileyo njengesiphumo sokubuyisa isixhobo ukuze siphinde senziwe / silungiswe okanye sibuyiselwe imali Ukuba ukubuyela kwakho kumvelisi akuhambelani nemigangatho yewaranti kunye neemeko oku kuya kuthathwa ngaphandle kwewaranti yomenzi. Inethiwekhi-Radios.com ayinakukwazi ukubonelela ngewaranti eseleyo kwimveliso kwaye intlawulo yokulungisa kunye nokuvavanya inokubiza umenzi kunye / okanye iNethiwekhi-Radios.com kulo msebenzi wokulungisa kunye nexesha elizayo. Lo mgaqo-nkqubo awuchaphazeli amalungelo akho asemthethweni.
4.3.5 Ukubuyisela iMpahla kwiNethiwekhi-Radios.com emva kweentsuku ezili-14 (OKUNGOYONWABI)
Apha kwiNethiwekhi-Radios.com sifuna ukuqiniseka ukuba uyonwabile into oyithengileyo kwaye ngeli xesha singamkeli iimpahla ezingafunekiyo emva kweentsuku ezili-14, sinokwazi ukwenza umahluko kwiimeko ezithile. Nxibelelana nathi ngokuthe ngqo ukuxoxa ngokubuyela kwakho ngakumbi - info@Network-Radios.com
Nceda uqaphele ukuba kwiimeko ezithile oku kuya kubandakanya umrhumo osetyenziselwa le nkonzo
Lo mgaqo-nkqubo awuchaphazeli amalungelo akho asemthethweni.
4.3.6 BUYISELA IINTLAWULO
Kwiimeko apho imbuyekezo yakho ingaphandle kwemiqathango yewaranti yomvelisi intlawulo inokubakho kulungiso kunye / okanye ekubuyisweni kweemveliso, ezi ntlawulo ziyahluka kwaye zixhomekeke kumenzi ngamnye; Iindleko ziya kunikwa umthengi ngendlela esesikweni kwaye kuya kufuneka ahlawulwe ukuze kulungiswe loo nto ingalunganga. Ukuba umthengi akafuni ukuhlawula umrhumo wokulungisa kuyakubakho zombini intlawulo yovavanyo, ephinde igqitywe ngumenzi, kunye neendleko zokubuyisa; Iindleko zokubuyisa ziya kubandakanya zombini iindleko zomenzi ukuba abuyisele into kwiNethiwekhi-Radios.com kunye nexabiso leNethiwekhi-Radios.com yokuthumela into kumthengi. Ngexesha lokubonelelwa kwekowuteshini yokulungiswa okungalunganga ngumenzi, umthengi uya kubotshwa ziintsuku ezisi-7 zokwaliwa, ukuba ukulungiswa kunye neendleko akuvunyelwanga ngazo zingaphelanga iintsuku ezisi-7 zokucaphulwa kwenethiwekhi Network-Radios.com iya kuqinisekisa into leyo ibuyiselwa kumthengi ngentlawulo esele ikhankanyiwe iyasebenza. Naluphi na ulungiso olwenziwe kwinto ngaphandle kolwazi okanye ugunyaziso lwenethiwekhi-Radios.com kwaye umenzi uya kuyiphelisa kwangoko iwaranti oyibambe kwimveliso. Kwiimeko apho izinto zibuyisiwe kwaye kungafunyanwa siphoso kuyakubakho intlawulo yovavanyo kunye nokubuya kwento engenasiphoso, le ntlawulo iya kuba ngokokubona kweqela lethu elibuyayo.
IINTLAWULO EZINOKWENZEKA- Apho kungakhathalelwanga nto kwaye intlawulo yokulungisa ifunwa, intlawulo inokusetyenziswa ngokusekwe kwiiNkonzo zaBathengi ze-Network-Radios.com nakuvavanyo lwabenzi. Ukuba umthengi akavumelani nolu vavanyo kusenokwenzeka ukuba iziko lenkonzo elizimeleyo lihlole imbuyekezo yakho. Ukuba iziphumo zolu vavanyo ziyafana nomvelisi zonke iirhafu ezinxulumene noko ziya kugqithiselwa kumthengi. Ukwala ukwenza intlawulo kwezi ntlawulo zingadlulanga iintsuku ezili-14 kunokubangela ukuba umenzi alahle into yakho.
IMIRHUMO YOKUNIKEZELA UKUBUYISELA: Ukuba uMthengi ugqiba kwelokuba abuyisele ipasile yakhe ngeendlela zakhe, ukubuyiselwa kweendleko akuyi kudlula kumrhumo omncinci wokuhanjiswa okufunekayo kwinkonzo yepasile ethembekileyo yokubuyisela loo nto kuthi. Nayiphi na inkonzo esetyenziswe ngaphezulu nangaphaya komgangatho osemgangathweni ayisayi kuhlawulwa phantsi kwalo mgaqo-nkqubo. Ubungqina bokuthumela buya kufuneka. Nceda uqinisekise ukuba iNethiwekhi-Radios.com IiNkonzo zaBathengi ziyaqwalaselwa ngaphambi kwayo nayiphi na intlawulo yokubuyisa ehlawuliweyo. Yonke imali ebuyiswayo kufuneka kuvunyelwene ngayo neNethiwekhi-Radios.com IQela leNkonzo yaBathengi, ngokubhaliweyo, ngaphambi kokuba ibuye.
4.4 UKUBUYELA KWAMANYE AMAZWE
Zonke iimpahla zenethiwekhi-Radios.com zigutyungelwe yiwaranti yomenzi. Kwimeko apho izinto zakho zingalindelekanga zivelise impazamo nceda unxibelelane neziko lenkxaso yemveliso yakho kuqala. Nangona kunjalo ukuba akukho nkxaso inikezelwayo emva koko iimpahla mazibuyiselwe kwiNethiwekhi-Radios.com ngaphakathi kwexesha lewaranti kwiindleko zabathengi.
4.5 UBUYISELA KWIMPAHLA EBUYILEYO
Xa ubuyisela imveliso, siya kuyicwangcisa imali yakho ngokukhawuleza kwaye senze konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba oku kungaphakathi kweentsuku ezisixhenxe zokusebenza xa sifumana kwaye siqinisekisa into leyo. Xa ubuyisela imveliso oyithengileyo usebenzisa ikhadi lekhredithi, kwa ela khadi ulisebenzisileyo liya kufakwa kwimbuyekezo. Ukuba unqwenela ukubuyisa into, nceda unxibelelane neqela lethu leeNkonzo zabaThengi nge info@Network-Radios.com
Zonke iimbuyekezo zixhomekeke kumrhumo wokuphinda usebenze ukuya kuthi ga kwi-15%, ngaphandle kokuba isebe lethu lobugcisa liya kuthi libhengeze njenge-DOA, okanye nesiphoso sokwenza.
4.6 UKUBUYISELA IIMPAWU KWI-NETWORK-RADIOS.COM (ISICELO)
Xa abathengi bethumela iimpahla kwiNethiwekhi-Radios.com, uxanduva lwephakheji luya kuhlala kunye nomthengi kude kube kwinqanaba lokuhlola, oku kusemva kokuhanjiswa, sicebisa ukuba zonke iimpahla ezithunyelwe kwiNethiwekhi-Radios.com zithunyelwe kusetyenziswa irekhodwe kwaye uhlobo lwe-inshorensi lokuposa; Nakuphi na ukulahleka ngokwasemzimbeni / kwemali akuyi kugutyungelwa yiNethiwekhi-Radios.com. Izinto ezonakalisiweyo kuhambo oluya kwiNethiwekhi-Radios.com iya kuba luxanduva lomthengi kwaye zonke iimfuno zebango ziya kuba kuMthumeli / kuMthengi
5 IIKHODI ZOKUKHUTHAZA / ZESAPhulelo
Iikhowudi zokwazisa / zokubuyisa zisebenza kuphela kwi-Intanethi kwaye kufuneka zingeniswe kwinkqubo yokuphuma ukuze ufumane isaphulelo.
Iikhowudi zokwazisa azinakusetyenziswa ngokudibeneyo kunye nezinye izithembiso zokwazisa
ULAWULO / UXanduva
Ngelixa siza kusebenzisa iinzame ezifanelekileyo ukuqinisekisa ukuchaneka kwalo naluphi na ulwazi esilubeka kwiWebhusayithi okanye esikunika lona, ​​asenzi ziqinisekiso, nokuba zichaziwe okanye zichaziweyo ngokunxulumene nokuchaneka kwayo. ukusuka kweyona mveliso. Sinelungelo lokuhlutha naziphi na iimpahla ezingahlawulwanga ngokupheleleyo kunye ne-invoyisi kumthengi ngazo naziphi na iindleko ezisemthethweni, ukuhanjiswa kunye nokubuyisela isitokhwe kwakhona (15%). Zonke iimpawu zokuthengisa ezipapashiweyo ziyipropathi yeenkampani zabo. I-Network-Radios.com inelungelo lokurhoxisa ii-odolo apho sicinga ukuba lo myalelo ubuqhophololo kwaye nalapho ukuhanjiswa kweemveliso kusenokungazalisekiswa. Kwiimeko ezinjalo imbuyekezo epheleleyo iya kukhutshwa. Esi sivumelwano silawulwa nguMthetho wase-Estonia kunye nawe kwaye sinikezela kulawulo olungabodwa lweenkundla zase-Estonia. Izinto ezingaphaya kwamandla ethu. Ukuba asikwazi ukubonelela le Nkonzo ngenxa yento engaphaya kolawulo lwethu olufanelekileyo njengokusilela kobugcisa, umbane, izikhukhula, okanye imozulu embi kakhulu, umlilo okanye ugqabhuko-dubulo, isiphithiphithi soluntu, imfazwe, okanye imisebenzi yomkhosi, imeko kaxakeka yendalo okanye yendawo, nantoni na eyenziwa urhulumente okanye elinye igunya elinobuchule okanye iimbambano zezoshishino zalo naluphi na uhlobo (nokuba lungabandakanyi abasebenzi bethu okanye lungabandakanywa), Asiyi kuba nabutyala ngoku. Xa ulwazi lomsebenzisi lwabelwana ngalo kunye ne-Network-Radios.com okanye nayiphi na i-Subsidiaries yethu, sinelungelo lokusebenzisa ulwazi lwakho ukwenza i-Network-Radios.com ifumane kunye/okanye ibonelele ngolwazi olongezelelweyo kunye neenkonzo, oku kunokuba liqela izizathu, umzekelo, kodwa kungaphelelanga apho, iNgxelo yokuThenga, ukuKhuselwa kweNgeniso kunye nokuNcedisa ngokuHanjiswa. Ulwazi lwakho aluyi kuthengiswa kwaye aluyi kusetyenziswa ngokungafanelekanga. Ngokusebenzisa i-website ye-Network-Radios.com okanye nayiphi na i-Subsidiaries yethu uyavumelana nokwabelana ngedatha. Ukuba nayiphi na imimiselo kunye neemeko zithathwa njengezinganyanzekiyo kwinkundla yomthetho ke icandelo elichaphazelekayo liya kususwa kwimimiselo yokuthengisa kwaye ukunyaniseka kwemimiselo eseleyo kuya kugcinwa.
Ulawulo lweengxabano: e-Estonia
5. UTSHINTSHO KWINETWORK-RADIOS.COM
Inethiwekhi-Radios.com inelungelo lokwenza naziphi na izilungiso okanye utshintsho kwimigaqo kunye neemeko zentengiso, izinto ezimelwe kwiwebhusayithi yethu, imigaqo-nkqubo okanye nayiphi na into kwinkonzo yethu. Abathengi baya kuba phantsi kwemiqathango yentengiso kwinqanaba lokufaka iodolo kuphela kwaye utshintsho luya kusebenza kuphela kubaThengi abathengayo emva kokuba kwenziwe naluphi na utshintsho. Umxholo oboniswe kwiwebhusayithi yeNethiwekhi-Radios.com yenziwa njalo ngemvume yomyili kwaye ayinakhutshelwa okanye yenziwe ngaphandle kwemvume yeNetwork-Radios.com .Ngaba unazo naziphi na izimvo ngokunxulumene nemiba ekwiwebhusayithi yethu, nge imigaqo kunye neemeko zethu, inkonzo yethu okanye umbuzo nje ngokubanzi nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi nge info@Network-Radios.com
Ifowuni + 351962422996 (Ireyithi yeNgingqi) 10am - 5.00pm GMT.
INetwork-Radios.com isebenza inkqubo yezikhalazo enobulungisa kwaye isebenzisa amava abasebenzi bethu kunye nobungcali babaxhasi bethu kunye / okanye abavelisi sizama ukusombulula zonke izikhalazo ngendlela efanelekileyo nekhawulezayo. Sifuna isikhokelo kwiMigangatho yokuRhweba nakwamanye amagunya axhasayo xa sizama ukusombulula nayiphi na imbambano. Nceda unxibelelane nathi ukuphakamisa isikhalazo sakho nge-imeyile: info@Network-Radios.com okanye ngeposi kule dilesi ingezantsi -
Mazikeen OÜ, umnini network-radios.com ithatha inxaxheba kwiNkqubo Amazon Services LLC Associates, inkqubo intengiso lobulungu eyenzelwe ukubonelela ngeendlela iziza ukufumana iimali zentengiso ngentengiso kunye nokudibanisa kwiipropati Amazon kuquka, kodwa kungaphelelanga apho, amazon .com, endless.com, myhabit.com, smallparts.com, okanye amazonwireless.com. Oku kuthetha ukuba ezinye zeemveliso ezidwelisiweyo zinokuthengiswa ngokuthe ngqo kwiAmazon. Ezo mveliso ziphawulwe ngokucacileyo njenge "Thenga kwiAmazon".
Ngokuqinisekileyo iF22 Plus 3G / WIFI (ivuliwe i-Android)